Sahanka Isku-ciriirinta Seattle Somali: Seattle Squeeze Survey
Waxaan doonaynaa jawaab-celintaada!
Macluumaadka lagu sheego sahankan ayaa waxaa loo tixgelinayaa in uu yahay diiwaan guud waxaa uu ku khasbanaan karaa shaacin guud. Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah, eeg Xeerka Diiwaannada Guud, RCW Cutubkiisa 42.56. Si aad u oggaato wax badan oo ku saabsan sida loo maareeyo macluumaadkaaga, eeg Bayaankeenna Asturnaanta. (http://www.seattle.gov/privacy)
Dadka u socdaalaya iyo kuwa ku dhex soconaya gudaha magaalada hoose ayaa waxaa ay ahayd in ay ku sameeyaan tiro wax-ka-beddel ah iyo isbeddelo waaweyn nidaamkeenna gaadiidka.
Fadlan naga caawi fahamka sida aad ku hesho macluumaadka taraafikada iyo isbeddellada aad ku sameysay sida aad u gaarto.
Tani ayaa waxaa ay kugu qaadaneysaa dhowr daqiiqo oo kaliya jawaab-celintaadana waxaa ay naga caawinaysaa sii wanaajinta sida dhammaanteennu aannu u qorsheyno oo aan ugu diyaar-garowno isbeddellada gaadiidka mustaqbalka ee magaalada hoose ee Seattle.
* 1. Caadi ahaan sideed ku oggaataa xaaladaha socdaalka ee hadda ka jira magaalada hoose ee Seattle? (dooro dhammaan kuwa ku habboon)
1. Khariidadaha Apple
2. Khariidadaha Google
5. Wargeys maxalli ah
6. Telefishan maxalli ah
7. Mareegtada wararka degaanka
11. Kanaallada kale warbaahinta bulshada (LinkedIn, iwm.)
12. Xayeysiinno ama ogeysiisyo ku dhegan basaska/tareennada ama boosteejooyinka/meelaha ay joogsadaan
13. Hadal afka ah
15. Khariidada taraafikada SDOT oo leh kaamiradaha taraafikada tooska ah
16. Bogga ama app-ka WSDOT ee leh taraafikada iyo kaamirado
17. Digniinada safarka telefoonka gacanta ee aan rukumatey
18. Midkoodna kuwan
Meel kale (fadlan qeex)
* 2. Sidee bey kuu ahayd socdaalka magaalada hoose ee Seattle?
Aad ugu fiicneyd sidii aan filayey, leh ciriiri yar iyo waqtiyo socdaal oo aad la iskugu halleyn karo
2. Xoogaa ka fiican sidii aan filayey
3. Isbeddel ma jiro
4. Xoogaa ka xun sidii aan filayey
5. Aad ugu xun sidii aan filayey, leh ciriiri badan iyo waqtiyo socdaal oo aan la saadaalin karin
6. Uma socdaalin magaalada hoose sanadka 2019
* 3. Wax ka mid ah mashaariicdan gaadiidka ee soo socda miyay saameeyeen safaradaada (waqtiyo safar dheer ama gaaban, meelo basaska ay istaagaan oo cusub ama goobaha la maro, iwm.?)
1. Xiritaanka saddex-toddobaad ee Jidka Alaskan Way Viaduct bishii Jannaayo
2. Furitaanka Waddada Dhulka-hoostiisa Marta ee SR 99 bishii Febraayo
3. Isbeddellada bishii Maarso lagu sameeyay marinnada baska horey u aadi jiray Waddada Dhulka Hoostiisa Marta ee Magaalada Hoose ee Seattle
4. Dumintii xagaaga laga fuliyay Viaduct ee Jidka Alaskan Way
5. Isbeddellada bishii Sibtembar lagu sameeyay marinnada baska ee ka yimaadda Galbeedka Seattle/Burien
6. Xiritaanka Buundada Fairview Avenue ee bishii Sibtembar
7. Lacagaha Loo Qaado Ka-gudbidda Waddada Dhulka Hoostiisa Marta ee bishii Nofeembar SR 99
8. Mashruucdan midkoodna ma saameyn safarrada aan ku tagey magaallada hoose
* 4. Iyada oo sabab u ah SR 99 Isku-ciriirinta Seattle, wax maka beddeshay qayb ka mid ah hab-dhaqankaaga socdaalka (ku socdaaley hab kale, waqti kale oo maalintii ah, meel fog ka soo shaqeeyay, iwm.)?
1. Haa, waxaan wax ka beddelay hab-dhaqankeyga intii lagu guda jiray xiritaankii Viaduct, balse waxaan dib ugu noqdey hab-dhaqankeygii hore markii la furey waddada dhulka hoostiisa marta ee SR 99
2. Haa, waxaan si ku meelgaar ah u beddelay hab-dhaqankeyga iyada oo sabab u ah saameyn taraafik kale.
3. Haa, waxaan wax ugu beddelay hab-dhaqankeyga sababo aan la xiriirrin saameyn taraafik.
4. Haa, waxaan si joogto ah u beddelay hab-dhaqankeyga.
5. Maya, wax kama beddelin hab-dhaqankeyga.
* 5. Haddii ay haa tahay, waa kuwee istiraatiijiyadaha socdaalka ee aad in badan adeegsato maanta marka la eego kuwa aad isticmaali jirtay? (dooro dhammaan kuwa ku habboon)
1. Baskiil raacid
2. Baaskiil wadaag
5. Baabuur waddid
6. Shirkadaha tagaasida (Uber, Lyft ama taxi)
7. Markab ama doomaha qaada rakaabka
8. Taksiga Biyaha
9. Tareenka fudud ee loo yaqaanno Link light rail
10. Ride2 iyo Via ee adeegga gaadiidka socdaalka ee isaga kala goosha ee meelaha dadka, rakaabka iyo gaadiidka isaga kala gooshaan
11. Baabuur la wadaago (tusaale, Reach Now)
12. Tareenka dadka socdaala ee sounder
13. Yareynta safarrada lagu tago magaalada hoose
14. Socdaalidda waqtiyada kala duwan ee maalintii
16. Meel fog ka shaqeyn ama guri ka shaqeyn
* 6. Halkeed ka heshaa macluumaadka ku saabsan saameynta taraafikada iyo ikhtiyaarrada socdaalka?
1. Waxaa ka helaa cidda aan u shaqeeyo
2. Waxaa ka helaa saaxiibo, saaxiibada shaqada, qoyska, iwm.
3. Waxaa ka helaa Metro, WSDOT, Sound Transit iyo/ama mareegtooyinka Magaallada Seattle, sida seattle.gov/traffic
4. Waxaa ka helaa ololeyaasha sida www.FlipYourTrip.org
5. Ma raadiyo macluumaadkaasi
6. Ma garanayo halka laga raadiyo macluumaadkaasi
* 7. Waa maxay fikradahaaga ku aaddan sidii aan gacan ugu geysan lahayn sii wanaajinta sida aad hadda ku tagto oo ku dhex marto gudaha magaalada hoose ee Seattle?
* 8. Wax badan oo dheeraad ah nooga sheeg naftaada! Bixinta macluumaadka hoose waa khiyaari, balse waxa aad wadaagto waxaa ay nagu caawin doonaan fahamka cidda ka qaybgashey sahankan gaaban.
Xaafadeed ku nooshahey? (Summadda Deegaanka)
Xaafadeed ka shaqeysaa? (Summadda Deegaanka)
* 9. Waa maxay jinsigaaga?
Doorbidaya in aan is-qeexo
* 10. Waa maxay da'da aad hadda jirto?
* 11. Waa maxay dakhliga guud ee qoyskaaga?
$30,001 ilaa iyo $60,000
$60,001 ilaa iyo $90,000
$90,001 ilaa iyo $120,000
In ka badan $120,000